Kolikoly, hosoka sy fanaovana hosoka: nidoboka any am-ponja ny tale jeneralin’ny Cotisse | NewsMada
Naiditra am-ponja vonjimaika eny Antanimora ny tale jeneralin’ny orinasam-pitaterana Cotisse, afakomaly alina ihany, taorian’ny nakan’ny mpitsara mpanao famotorana eo anivon’ny sampam-pitsarana miadidy ny kolikoly ny Pac azy. Anisan’ny niahiahiana azy ny hosoka sy fanaovana hosoka ary ny kolikoly.
Notanterahina, ny 10 jona teo, ny tolakandro ha­tramin’ny alin’iny ny fanadihadiana sy fa­motoran’ny Pac ny DG an’ny Cotisse, Nante­naina Rakotoa­risoa Alain Eddie, fantatra amin’ny so­lon’ana­ra­na, Alain Cotisse. Nampi­dirina am-pon­ja vonjimaika (MD) ny te­nany taorian’ny fihainoana azy. Voalaza fa anisan’ny niahiahiana azy ny kolikoly amin’ny fividianana tany eny amin’iny faritra manodidina an’Anosy Ava­ratra na Antso­fi­nondry iny. Voarohirohy ho nanao hosoka tamin’izany ny tenany ka izao nandraisan’ny mpitsara fanapahan-kevitra nampidirina am-ponja izao.
Na izany aza, tsy mijanona eo ny fanadihadiana sy ny famotorana fa mbola hitohy, araka ny loaharanom-baovao.
Etsy andaniny, afaka tapa-bolana any indray koa vao misy raharaha miakatra eny amin’ny Pac 67 ha.
“Raharaha Razaimamonjy Claudine sy Rajaonah Mbola ”
Tsiahivina fa anisan’ny mbola tokony hiakatra eny amin’ity rantsam-pitsarana ity ireo mpandraharaha roa, Rajaonah Mbola sy Ra­zaima­monjy Claudine. Efa tokony ho tafiditra tamin’ny fotoam-pisokafan’ny Pac ny volana avrily teo izany, saingy nihemotra amin’ny tsy mbola fantatra noho ny valanaretina covid-19, ka nikatonan’ny fitsarana. “Ho hita eo ihany ny fandaminana eto aminay. Na izany aza, mety efa handeha tsy ho ela ireo raharaha ireo”, hoy hoy ny tonia mpampanoa lalàna ambony, Razafindrakoto Sofolohery, ny herinandro teo. Niverina nisokatra indray tamin’ity herinandro ity ny eny anivon’ny Pac. “Miisa dimy ireo raharaha handalo eto ka ezahina ny hitsarana tranga iray isanandro”, hoy ihany izy. Anisan’ izany ny resaka zava-mahadomelina, mifandraika amin’ny kolikoly ny telo. Fano­dinkodinanana fananam-panjakana sy famotsiam-bola kosa ny roa hafa. Hatre­to aloha izany, tsy nisy afa-bela ireo nandalo teny anivon’ny Pac.